20,000 ton compound fatịlaịza mmepụta akara - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Usoro nke mmepụta kwa afọ nke fatịlaịza 20,000 bụ ngwakọta nke akụrụngwa dị elu. Ọnụ ego dị ala na mmepụta arụmọrụ dị elu. Onyinye fatịlaịza mmepụta akara nwere ike ji mee ihe maka granulation dị iche iche mejupụtara ngwaọrụ. N'ikpeazụ, a ga-akwadebe fatịlaịza dị iche iche dị iche iche na usoro dị iche iche dị ka mkpa n'ezie si dị, mejupụta ihe oriri na-edozi ahụ nke ọma, ma dozie esemokwu dị n'etiti mkpa ihe ọkụkụ na ala.
Mejupụtara fatịlaịza mmepụta akara nwere ike na-emepụta elu, ọkara na ala lekwasị onyinye fatịlaịza maka iche iche kụrụ. Mmepụta akara adịghị mkpa nkụ, na obere ego na obere oriri ike.
Enwere ike ịpụta ụdị nke usoro mmepụta fatịlaịza mejupụtara n'ụdị na nha dị iche iche iji piakota ma mepụta ihe dị iche iche.
N'ikwu okwu n'ozuzu, onyinye fatịlaịza nwere ma ọ dịkarịa ala abụọ ma ọ bụ atọ nri (nitrogen, site, potassium). Ọ nwere njirimara nke ọdịnaya dị elu na obere mmetụta. Fatịlaịza fatịlaịza na-arụ ọrụ dị mkpa na njikọta spam. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị melite Fertilization arụmọrụ, kamakwa kwalite anụ na akwa mkpụrụ nke kụrụ.
Dị ka ọkachamara na-emepụta fatịlaịza mmepụta akara akụrụngwa, anyị na-enye ndị ahịa akụrụngwa mmepụta yana ezigbo ngwọta dị iche iche maka ikike ikike mmepụta dị iche iche dị ka tọn 10,000 kwa afọ ruo tọn 200,000 kwa afọ.
Akụrụngwa maka imepụta fatịlaịza na-agụnye urea, ammonium chloride, ammonium sulfate, amonia amonia, ammonium monophosphate, diammonium phosphate, potassium chloride, potassium sulfate, tinyere ụfọdụ ụrọ na ndị ọzọ fillers.
Ihe ngwakọta nke fatịlaịza nwere njirimara nke oriri ike, nnukwu ikike ịmịpụta yana ezigbo uru akụ na ụba.
2. Mmepụta akara adopts akọrọ granulation, iwepu ihicha jụrụ usoro na ukwuu mbenata na-eri ntinye nke akụrụngwa.
3. Ngwakọta fatịlaịza na-arụ ọrụ bụ kọmpat na ezi uche, na-ekpuchi obere mpaghara.
4. N'ime usoro mmepụta, enwere obere ike ike na enweghị mkpofu atọ. Mejupụtara fatịlaịza mmepụta akara nwere mụ arụmọrụ, a pụrụ ịdabere na àgwà na ogologo ọrụ ndụ.
5. The compound fatịlaịza mmepụta akara nwere ike iji na-emepụta iche iche compound fatịlaịza ngwaọrụ. Na ọnụ ọgụgụ granulation dị elu.
6. Ngwakọta fatịlaịza na-emepụta ihe nwere ike ịmepụta fatịlaịza fatịlaịza n'ọtụtụ iche iji gboo mkpa nke ndị ahịa dị iche iche.
N'ikwu okwu n'ozuzu, usoro mmepụta fatịlaịza mejupụtara akụkụ ndị a: ngwakọta usoro, usoro granulation, usoro ndinuak, usoro nyocha, usoro mkpuchi na usoro nkwakọ ngwaahịa.
1. Dynamic batch igwe:
Enwere ike ime ihe karịrị ihe atọ. Igwe batching nwere ihe karịrị okpukpu atọ, ma nwee ike ịbawanye ma belata silo dịka ihe ndị ahịa chọrọ. Na nbata ọ bụla nke silo, enwere ọnụ ụzọ eletrik na-ekpo ọkụ. N'okpuru silo, a na-akpọ ya hopper, nke pụtara na ala nke hopper bụ eriri ebu. A na - ekwu na a na - akwụnye hopper na onye na - ebu belt n'otu akụkụ nke nnyefe nnyefe, akụkụ nke ọzọ nke mpempe akwụkwọ ahụ jikọtara ya na ihe mmetụta erughị ala, akụkụ ihe mmetụta na njikwa ikuku na-ejikọkwa na kọmputa. Igwe a na - ejide ihe igwe eletrik, nke onye na - achịkwa ya na - achịkwa ya, na - atụle ihe ọ bụla maka ihe ọ bụla. Ọ nwere uru nke usoro dị mfe, ihe dị elu dị elu, ọrụ dị mfe na ojiji a pụrụ ịdabere na ya.
2. Vetikal Chain Crusher:
Gwakọta ihe dị iche iche mejupụtara n'otu akụkụ ma tinye ha n'ime igwefụfụ kwụ ọtọ. A ga-akụrisị ihe ọkụkụ n'ime obere ihe iji gboo mkpa nke usoro granulation na-esote.
3. Vetikal diski feeder:
Mgbe akụrụngwa akụrụngwa, a na-ezigara ya na feeder diski Vertical, a na-agwakọta akụrụngwa ma na-emegharị nke ọma na igwekota. Ime dị n'ime igwekota bụ polypropylene ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara. Ngwa ndị dị otú ahụ nwere nnukwu corrosion na viscosity adịghị mfe ịrapara. Ngwakọta agwakọta ga-abanye drọmị granulator.
N'ịnabata akọrọ extrusion technology, ihicha usoro na-omitted. Ọ tumadi na-adabere ná mpụga mgbali, nke mere na ihe na-amanye ka abịakọrọ n'ime iberibe site abụọ agbara ala clearances. Ata njupụta nke ihe nwere ike ịbawanye site na 1.5-3 ugboro, si otú a na-eru ogo ike ụfọdụ. Karịsịa adabara ebe dịkwuo ngwaahịa tojupụtara ibu. Ọrụ ekwedo na dịgasị iche iche nke imeghari nwere ike gbanwee site na mmiri mmiri nsogbu. Akụrụngwa a abụghị naanị sayensị na ezi uche dị na ya, mana yana enweghị obere ego, mmetụta ọsọ ọsọ yana ezigbo uru akụ na ụba.
5. Rotary Drum Ọnọdụ:
A na-ejikarị ya eme ihe iji kewaa ngwaahịa agwụla site na ihe eji emegharị ihe. Mgbe sieving, ruru eru ahụ na-nri n'ime wrapper igwe, na-erughị eru ahụ na-nri n'ime vetikal yinye crusher-eme ka granulated ọzọ, si otú ịghọta ngwaahịa nhazi ọkwa na edo nhazi ọkwa nke okokụre ngwaahịa. Igwe ahụ nakweere ihuenyo jikọtara maka mmezi na ngbanwe dị mfe. Ya Ọdịdị dị mfe ma iberibe. Ọrụ dị mma ma kwụsie ike bụ ngwa dị mkpa na mmepụta fatịlaịza.
6. Kọmputa quantitative Packaging Machine:
Mgbe enyochachara ahụ, ha na-akwakọba ya site na igwe igwe. Igwe nkwakọ ngwaahịa nwere nnukwu akpaaka, ijikọ ọnụ, suture, nkwakọ ngwaahịa na njem, nke na-achọpụta ngwa ngwa ngwa ngwa ma na-eme ka usoro nkwakọ ngwaahịa ahụ rụọ ọrụ nke ọma ma zie ezi.
7. eriri ebu:
Onye na-ebufe na-arụ ọrụ dị oke mkpa na usoro mmepụta, n'ihi na ọ na-ejikọ akụkụ dị iche iche nke usoro mmepụta niile. On a onyinye fatịlaịza mmepụta akara, anyị na-ahọrọ na-enye gị a eriri ebu. E jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ na-ebugharị, ndị na-ebugharị belt nwere nnukwu mkpuchi, na-eme ka usoro mmepụta gị na-arụ ọrụ nke ọma.